Akụkọ - Otu esi eme ka ichapu umuaka
Ọtụtụ ndị nne na nna ga-azụlite àgwà ụmụ ha nke ịsa ikikere ezé kemgbe ha bụ ụmụaka, kedu mgbe ụmụaka kwesịrị ịsa ikikere ezé nke ọma. Kedu ụdị asacha ezé m kwesịrị ịhọrọ? Kedụ ihe ị ga-eme mgbe ị na - ahọrọ ịsa ezé ụmụaka? Ka anyi kesaa taa: Otu esi ahota okike umuaka
Ka anyị leba anya n’oge nwa ahụ malitere ihicha. Mgbe nwatakịrị ahụ dị ihe dị ka afọ abụọ, ezé dị elu na nke ala na-adịkarị ogologo. N'oge a, nne nwere nlezianya kwesịrị ịzụlite omume nchacha nwa ya wee zụta nke kwesịrị ekwesị maka nwa ahụ. Nhicha ezé.
Mgbe ị na-ahọrọ akwa ezé ụmụaka, ihe mbụ ị ga-ele anya bụ nro nke ahịhịa ezé. A ga-eme ka ezé eze ahụ dị nro dị ka o kwere mee. Ejila ihe omimi na ike siri ike. Ọkara na oke bristles ga-emebi ịdị nro nke nwa ahụ. Gọm.
Tụkwasị na nke a, lelee ma etutu ụmụaka nke ezé ezé a họpụtara maka nwa gị pere mpe, ọ bụghị oke obosara, nke sara mbara adịghị mfe ịgbagharị n'ụzọ dị mfe n'ọnụ nwa ahụ ma ọ bụrụ na ọ pere mpe, obere obere ya nwere ike ibu Mpaghara Ịchacha.
E nwekwara nsogbu nke njikwa. Ebe ọ bụ na obere aka nwatakịrị ahụ pere mpe, ahọrọla ihe pere mpe nke ukwuu, kama họrọ obere aka, nke ga-enyere nwata ahụ aka ịghọta mgbe ọ na-ehichapụ ezé. Mgbe ị na-azụta eze eze, jide n’aka na ị kpọtara nwa gị maka ntụnye aka.
Mgbe ahụ enwere oge nnọchi nke ezé ụmụaka. A na-atụ aro ka ị dochie ha kwa ọnwa 3-4, kama ichere ruo mgbe brọlị ezé na-ehulata ma ọ bụ daa. N'ezie, ọ bụrụ na ahịhịa ezé ma ọ bụ daa n'ime ọnwa 3, gbanwere ya ozugbo.
Post oge: Ọgọstụ-27-2020